Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. बैतडीका स्थानीय नहरको फोहोर पानी प्रयोग गर्न बाध्य – Emountain TV
बैतडी, २ जेठ । बैतडीको पाटन नगरपालिकाका स्थानीय फोहर पानी प्रयोग गर्न बाध्य छन् । स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्थापन नहुँदा उनीहरु नहरको फोहोर पानी प्रयोग गर्न बाध्य भएका हुन् ।
२०७१ सालमा बैतडीको पाटनलाई नगरपालिका बनाइएको हो । तर नगरपालिकामा स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था भएको छैन । जसको कारण पाटन सहरका व्यवासायी र स्थानीयले नहरको फोहर पानी प्रयोग गर्न बाध्य छन् ।
व्यवसायीहरुले खाना पकाउन, सरसफाई गर्न र पिउनको लागि नहरको फोहोर पानी प्रयोग गर्ने गरेका छन् । निर्वाचनको समयमा जनाएको प्रतिबद्धता अनुसार स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था गर्न स्थानीय सरकारले ढिलाई गरेको स्थानीय र व्यवसायीको गुनासो छ ।
स्थानीय र व्यवसायीले ट्याक्टरमार्फत नहरबाट फोहोर पानी ल्याउने गरेका छन् । सरकारले राजश्व संकलन गरेपनि खानेपानी व्यवस्थापनमा चासो नदिएको व्यवसायीको गुनासो छ ।
स्थानीय तहले पाटन बजार क्षेत्र नजिक पानीको मुहान नभएकाले समस्या भएको भन्दै समाधान गर्न बृहत खानोपानी योजनाका डिपीआर तयार पारिरहेकोे जनाएको छ ।
फोहोर पानीका कारण रोगको संक्रमण बढेको भन्दै स्थानीय र व्यवसायीले स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्थापन गर्न माग गरेका छन् ।